साहित्य Archives - Page4of9- Bulbul Samachar
शनिवार, मंसिर ४ गते
कविता विद्याश्री सिंह मलाई आँखाहरुको संवाद मनपर्छ।उसका अश्लील नजरहरुले चिमोठ्न खोजेमेरो वदनको कुनै हिस्सा,मेरा नजरहरुले पनि लगाउन सक्छन् थप्पड!दुख्ने गरि उसको पुरुषत्त्व माथि! त्यसैले,म अराजक हुँ। आमाको रातो फरीया,बज्यैको ढाकाको चोलो,बहुतै मनपर्छ मलाई!तर,मलाई ‘बा’...
गीत: घाउमाथि टेक्दा !
राजाराम पौडेल सबै माझ पुर्‍याउछु गाह्रो भयो छेक्दासाह्रै पीडा भएको छ घाउमाथि टेक्दा । मन शान्त छैन उनका कर्तुतहरु देख्दाधेरै पाना भरि सके सम्झिएर लेख्दा । कुरा चपाई बोल्ने बानी छ खुरापातीस्वार्थ पूरा गर्न...
आइतवार, कार्तिक १४ गते
योगेश नेपाल “अनन्त“ आँखामा भयो या मुटुमा तर प्यार भयो,जुधारु रहेछ्न् ती नयन मेरो त हार भयो! अचम्म बनायो दङ्ग बनायो त्यो मुस्कानले,अलौकिक मनभित्र प्रेमको साभार भयो! गुलावी अधर यौवनले भरिपुर्ण त्यो शरीर ,यो...
कविता “मनको पुकार !”
बिहिवार, कार्तिक ११ गते
सुमन वर्षा प्रिय !चन्द्रमाले उज्यालो पारेकोधर्तीको अनुपम सुन्दरताको बखानसुन जस्तै टल्किएको पानीमामाछाहरुले गरेको प्रेमको अद्भुत कलकल ध्वनीअन्धकारको आधिपत्यमा दखल पुगेपछिटुहु टुहु गर्दै उल्लुले चन्द्रमालाई गरेको गुनासोप्रेमिल आत्माहरुले बियोगमा निकालेकाअसन्तुष्टि र आबेगका चित्कारहरूसुन ! आउ...
आइतवार, कार्तिक ७ गते
भावना खनाल काेपिला हाे मगमगाउदै बास्ना छर्नुपर्छ अब ,धर्ती रंगाइ आकाश छुने प्रयास गर्नुपर्छ अब !! बादलहरु पन्छाएर जून खाेज्ने बाहानामा ,भिर पाखा पहरा ती जंघार तर्नुपर्छ अब !! विरताकाे कथा जाेड्दै सिङ्गाे मुलुक...
कविता “प्रकृतिलाई के पिर परो ?”
अम्बिका भण्डारी पसिनाले रोपेको धान पाके पछि बाढी आयोहर्ष खुशी गएको छ चारैतिर आँसु छायो ।प्रकृतिलाई के पिर परो हाँस्ने बेला रोइराछभर पर्नै गाह्राे भाछ उल्टो सन्देश दिइराछ।। उर्जाशील हातहरु यतिबेला दुखेका छन्मन भित्रका...
लघुकथा- “पुनर बिबाह”
मोहन आचार्य “जलद”सृजना ग्रामिण रहन सहनमा हुर्केकी युवती थिइन् । उनलाई मोजमस्ती सहरिया जीवनकाे भूत सल्केको थियो । आफ्नो लोग्नेसंगको अनबन पछि छुट्टै बस्न थालिन । आफन्तले धेरै सम्झाए । आखिरी छुट्टिने दिनसम्म अशोकले...
शनिवार, कार्तिक ६ गते
(एक) जान त गयो दुश्मन हो फर्किन सक्छ ।पुरा नभएका कामहरु सम्झिन सक्छ । खुशी मनाउदैन म बाँचे भनेर अहिलैमध्यराति तरवार बोकेर उभिन सक्छ । यदि निसानाबाट फुत्किए भनेँ उसकोघरमा बा आमासँग बद्ला लिन...
“जूनः म तिमीलाई प्रेम गर्छु”
बिहिवार, कार्तिक ४ गते
कविता “जूनः म तिमीलाई प्रेम गर्छु”अल्पज्ञानी तिमी कतै आकाशमा जन्मियाैम कतै धरतीमा जन्मिएँ तिमी जुनेली भएर अायाैमन्द मन्द मुस्कुरायाै,म आँखा भएर पछ्याएँतिम्रै कल्पनामा रमाएँ तिम्रो अनुहारमा घाम ठाेकिएपछिमायाको पछ्याैरीले बेरेकी हाै मलाईर हिँड्न सिकाएकी...
बुधवार, कार्तिक ३ गते
सुरज उपाध्यायतिमी उता के गर्दै छौ म त यता एक्लैआकाश यौटै भए पनि भयो संसार बेग्लै । डर लाग्छ सधैं खबर सोधी राख्न पनिसम्झनाले सताउदा बस्छु तारा गनिघाम एक्लै जून एक्लै म पनि छु...